Malaia garnet, kubva kuKenya / pyralspite ane kaccium / Vhidhiyo
Malaia garnet, kubva kuKenya
Malaia garnet kana Malaya garnet inonzi gemological varietal zita rekujeka kune rima zvinyoro-orange zvinopenya, zvitsvuku zvearangi, kana kuti yellowish orange garnet, iyo inosanganiswa mukati me pyralspite series pyrope, almandine, uye spessartine ine kaccium. Zita rokuti Malaia rinoshandurwa kubva muchiSwahili kunoreva, "mumwe asina mhuri". Inowanikwa kumabvazuva kweAfrica, mu Umba Valley necheTanzania neKenya.
Garnet marudzi anowanikwa mumitambo yakawanda inosanganisira tsvuku, machena, maruva, ruvara, ruvara rwepepuru, ruvara, ruvara rwebhuruu, ruvara, ruvara, ruvara uye ruvara, ruine ruvara rwebhuruu.
Muenzaniso unoratidza dzika dzvuku tsvuku garnet inogona kuratidza.
Garnet species 'chiedza chekuenderera kwemasimba chinogona kubva kubva pamatombo-mavara ezvisikwa zvakajeka kune marudzi epa opaque anoshandiswa kwezvinangwa zvemabhizimisi seabrasives. Kuchengetedza kwemaminerini kwakarongerwa se vitreous (girasi-soro) kana kuti resinous (amber-like).
Garnets ndezvesosilicates dzine rondedzero yakawanda X3Y2 (Si O4) 3. Nzvimbo ye X inowanzobatwa nemasikirwo akasiyana-siyana (Ca, Mg, Fe, Mn) 2 + uye Y yemaiti nemagetsi akafanana (Al, Fe, Cr) 3 + mune imwe octahedral / tetrahedral inoitwa [SiO4] 4- iri kutora tetrahedra. Garnets inowanzowanikwa mu dodecahedral crystal tsika, asi inowanikwawo mumutambo we trapezohedron. (Cherechedza: shoko rokuti "trapezohedron" rinoshandiswa pano uye mundima dzakawanda dzomumumvuri rinoreva chimiro chinonzi Deltoidal icositetrahedron mune zvakasimba geometry.) Vanoyevedza mu cubic system, vane matambo matatu akaenzana akaenzana uye anoenzanirana mumwe nomumwe . Garnets hairatidzi kujekesa, saka kana pavanoputsika pasi pekunetseka, zvipembenene zvakashata zvinogadzirwa (conchoidal).
Nokuti iyo makemikari yegarnet yakasiyana, hutano hweatomu mune dzimwe mhando dzakasimba kune dzimwe. Somugumisiro, boka iri remineral rinoratidza hutambu hwakasiyana pamwero weMohs we-6.5 kusvika ku7.5. Mhando dzakaoma dzakadai semarimine dzinowanzoshandiswa kuti zvive zvinangwa.